Ozinina Pharmalagasy “Hamokatra fanafody 12 ao anatin’ny 3 taona”
Tonga omaly tamina fiaramanidina manokana teny Ivato ny entana milanja 100 taonina hananganana ilay ozinina mpamokatra fanafody na Pharmalagasy izay natsidiky ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina, tamin’ny kabariny ny alahady teo.
Manomboka eto dia hiova ny tantaran’I Madagasikara, hoy ny filoha. Voalohany izao ataontsika izao fa fanafody miisa 12 no tsy maintsy vitaintsika ao anatin’ny 3 taona ho avy. Be dia be ny olona hiasa ao amin’ny ozinina. Hisy vahiny maro ao, izany hoe ireo siantifika, ary hanatevina ny siantifika Malagasy. Ny akora dia misy fiaraha-miasa manokana amin’ny Bionnex, izay mpamokatra Arthemesia betsaka indrindra aty Afrika. Izany rehetra izany no miara-miasa amin’ny fitondrana Malagasy ka ny CVO+ ho atao “gelule”. 4 herinandro no niasana andro aman’alina hahatongavana amin’ny “dosage” tena izy mba hitondrana fanasitranana manerana izao tontolo izao. Io CVO+ dia ilay miaro sy manasitrana no vokarina izao voalohany izao. Misy amin’ireo fitaovana no avy any Alemana ary novokarina tany Sina. Misy koa avy any Sina. Vonona hiatrika ny fifaninanana amin’ireo Big Pharma. Ho sokafana ho an’ny Malagasy rehetra aloha, ny Pharmalagasy, izany hoe samy afaka maka “action” ao anatiny. Hisy fanambarana lehibe sy goavana ho atao amin’izay. Hisy koa fandraisan’anjarana orinasam-panjakana ao anatin’izay fisokafana izay. Mikasika ny resaka “industrialisation” dia mampirisika ny sehatra tsy miankina ny fitondrana mba handraharaha eto amin’ny firenena. Raha vao ny Malagasy no mitantana ireny orinasa ireny dia matetika maty antoka na “faillite” ilay orinasa. Ohatra amin’izany ny Air Madagasikara sy ny Jirama. Ilaina ny fiarahamiasa amin’ireo mpandraharaha sy mpamatsy vola hampiroborobo ny indostria eto amintsika, hoy hatrany ny filoha.